स्थानीय तह Archives - Lokpati.com
Tag - स्थानीय तह
राजनीति • सरकार
एक सय दुई स्थानीय तहले नाम, केन्द्र फेरे!
काठमाडौं । एक सय दुई स्थानीय तहले नाम तथा केन्द्र परिवर्तन गरेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारलाई स्वीकार गर्नै गाह्रो हुने गरी केन्द्र तथा नाम फेर्ने प्रस्ताव परेको हो ।
स्थानीय तहले समृद्धि सम्भावना समाउन सकेन
काठमाडौं ।स्थानीय तहले समृद्धिका सम्भावनाहरुलाई समाउन सकेका छैनन । स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान नसकेको...
स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ
काठमाडौं, १२ माघ। पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्न थालेका हुन्।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २८१ को उम्मेदवारी
काठमाडौं, २८ कात्तिक। आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहका ४८ पदका लागि हुने उपनिर्वाचनमा २८१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, ३५ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा विभिन्न ४८ पदका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने...
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक : तलबै नलिई कसरी चल्छ जीविका ?
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको...
आफ्नो तलव विद्यार्थीलाई दिने यी हुन् मनकारी जनप्रतिनिधि
म्याग्दी, ८ असाेज। म्याग्दीका एक जनप्रतिनिधिले आफूले पारिश्रमिकबापत पाउने तलब विद्यार्थीलाई सहयोग गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर गर्बुजा पुनले आफ्नो दुई...
स्थानीय तहमा मनपरी : प्रमूख–उपप्रमूखबीच जुहारी, जहाँ ज्यानै गयो
काठमाडौं, २४ भदौ। सातै प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा प्रमूख–उपप्रमूखबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ।केहीको बोलचाल बन्द छ। केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका छन्।
बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, नीजी स्वार्थ, दलभित्रको...
नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानूनी रुपमा सल्लाहकार र पीए
काठमाडौं, १० भदौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो। जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त, कार्यकर्तालाई गैरकानूनी रुपमा सल्लाहकार र पीए नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम...
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने कानून किन बनाएको ? : सर्वाेच्च
काठमाडौं, ६ भदाै। सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका अरु प्रदेशसभालाई...
स्थानीय तहकाे वर्गीकरण : कुन तह कुन वर्गमा ? (सूचिसहित)
काठमाडाैं । प्रशासनिक आधारमा नेपालका स्थानीय तहहरुकाे वर्गीकरण गरिएकाे छ । नेपालमा रहेकाे महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक आधारमा वर्ग छुट्याउँदै स्थानीय तहहरुकाे वर्गीकरण गरिएकाे हाे ।